KITAABKA BARASHADA SALAADDA (QEYBTII 8AAD) (W/Q:-FIRDOWSA C/QAADIR CABDI). | THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS WEBSITE	Stay Connected
Muqdisho, Axad 05 Nov 2010, (Hillaac.Net) WAAJIBAADKA SALAADDA Waajibaadka Salaaddu waxay isugu jiraan waxyaabo afka laga akhrinayo iyo ficillo xubnaha laga qabanayo salaadda dhexdeeda, kuwaasoo haddii ruuxa tukanayaa uu ulakac uga tago ay salaaddiisu burayso; haddiise uu ka tago isaga oo hilmaansan wuxuu ku kabayaa sujuudda loo yaqaanno sujuuddu sahwi (sujuudda hilmaanka), salaaddiisiina waa ansax insha Allah.
Waajibaadka Salaadda waxaa ka mid ah:
a) takbiiraha oo dhan (allahu akbaryaasha salaadda dhexdeeda) marka laga reebo takbiiratul ixraamka (allahu akbarta xirashada)
b) tasbiixda rukuucda iyo sujuudda dhexdooda la akhriyo (subxaana rabbiyal cadiimi iyo subxaana rabbiyal aclaa)
c) samicallaahu liman xamidah, iyo rabbanaa walakal hamdu (oo la akhriyo marka rukuucda laga soo tooso)
d) ducada la akhriyo fadhiga u dhexeeya labada sujuudood (rabbighfirlii..)
e) Attixiyaadka hore.
f) Fadhiga attixiyaadka hore
g) Dhammaan waajibaadkaan qofkii kas uga taga salaaddiisu way buraysaa sidaan kor kusoo sheegnayba, qofkiise hilmaan uga taga salaaddiisu ma burayso waxaase looga baahan yahay inuu la yimaado labo sujuudood ka dib marka uu dhammeeyo attixiyaadka danbe iyo salliga nabiga, ka hor inta uusan salaadda ka bixin. Labadaas sujuudood oo kabniin u noqonaya nusqaantii salaaddiisa ku timid iyo shakigii salaaddiisa kasoo galay, sheydaankii waswaasiyayna ihaano iyo eryid u ah.
Haddii ruuxu uu illoobo atixaadka dhexe, dabadeedna uu xasuusto inta uusan si fiican u istaagin wuu u noqonayaa oo akhrinayaa, haddiise uu xasuusto marka uu si fiican isku taago oo uu rakcadii 3aad u taagan yahay, markaas ku noqon maayo ee salaaddiisa ayuu sii wadanayaa, marka uu dhammaystiro sallaadda ayuu la imaanayaa labo sujuudood, oo ah sujuudu sahwi, sidaas ayayna salaaddiisii qofkaas ugu kabmaysaa insha allah. SALAADAHA WAAJIBKA AH IYO WAQTIYADOODA
Salaadaha waajibka ah ama faralka ahi waa 5 salaadood waxayna kala yihiin:
Waqtiga la tukanayo
Qorraxdu intaysan dhicin
Qorracdu markay dhacdo
Marka aasku si fiican u madoobaado
 Dhalashada fajarka waxaa laga wadaa marka waagu dillaaco inta aysan qorraxdu soo bixin.
 Bacdal zawaal waxaa loola jeedaa marka qorraxdu ay ka tagto cirka bartankiisa oo ay u badato dhinaca galbeed ee ay u dhacdo.
Re: Robbery Vitims Assisted By Thieves (By:-Abdulkadir Osman (Aroma)
Axmed Madoobe “Haddii Aniga iyo Barre Hiiraalle aan Kismaayo ku dagaallanno Dowladda Soomaaliya ayaa Mas’uul ka ah”
Cadde Muuse, Cabdi Weli Gaas, Faroolle, Iyo Cumar Cabdi Rashiid oo soo dhaweeyay una Hambalyeeyay Axmed Madoobe, Iyo Isku habarwacasho ka socota magaalada Kismaayo!
Daawo Heestii Degmo (Cali Najiib)